မျှော်လင့် နေဆဲဘဲ: Lonely Planet interviews Burma’s Aung San Suu Kyi
Burmese opposition politician and Nobel Peace laureate Aung San Suu Kyi was recently released fromaperiod of house arrest that began in 1989. Lonely Planet author Austin Bush had the chance to Skype with her on topics ranging from her country’s name to what travellers can do to help the Burmese people.
LP: First of all, we have decided use both names for our Myanmar/Burma travel guide, but which do you prefer?
ASSK: I prefer ‘Burma’, because the name was changed [by the government] without any reference to the will of the people.
LP: Previously, you have been opposed to foreign tourists visiting Burma. However, you appear to have softened this stance over the last few years. How do you feel now about foreign tourists visiting the country? Can tourists do anything to benefit the move towards democracy?
ASSK: I think the NLD [National League for Democracy, the main opposition party] came to that decision about six to seven months ago. We are not in favour of group tourists, but we don’t mind if individuals come to Burma. Foreign tourists could benefit Burma if they go about [their travels] in the right way, by using facilities that help ordinary people and avoiding facilities that have close links to the government. If [tourists make the effort] to meet people working for democracy, then it might help.
LP: Why are there so many areas restricted to tourists in Burma? Do you think this will change in the near future?
ASSK: I’m not quite sure. Along the border areas it’s because hostilities might break out again. It also might have something to do with the fact that there aren’t enough facilities for tourists in remote areas.
LP: To many visitors, Yangon (Rangoon), the former Burmese capital, can appear as if it’s caught inatime warp. In your experience as someone who grew up there, how has the city changed over the years? What’s your favourite part of the city?
ASSK: I haven’t noticed any great changes since I’ve been under house arrest. The changes I’ve noticed are that there are many people using handphones [mobile phones], which I hadn’t seen seven years ago. But the streets and buildings appear the same…. It’s beenalong time since I’ve been able to explore Yangon. TheShwedagon is very important, and Sule Pagoda, but I spend much of my time at the NLD office.
LP: Your father, General Aung San, is viewed by many as the architect of Burmese independence. The museum dedicated to him, located in his former home, appears to be closed. Do you know why?
ASSK: I don’t think [the government] wants to encourage people to go there. They don’t want to remind people too much of my father. Officially they don’t allow portraits of my father to be hung in government offices over the last decade, probably because of the association with me and also because of how my father regarded the role of the army.
This interview with Aung San Suu Kyi will appear in the next edition of Lonely Planet’s Myanmar (Burma) guidebook.
ကမ္ဘာကျော် Lonely Planet စာအုပ်ဟာ ကမ္ဘာနိုင်ငံခြား ခရီးသွားဧည့်သည်တွေအတွက် အလွန်အားထားရတဲ့ စာအုပ်ပါ။ Lonely Planet စာအုပ်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံ ခရီးသွားခြင်းအပေါ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ အမြင်ကို အင်တာဗျူးထားတာပါ။
LP: ပထမဆုံးအနေနဲ့ ကျွန်တော်တို့ Myanmar / Burma ဆိုတဲ့ အသုံးအနုံး ကိုသုံးဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။ ဘယ်စာလုံးကိုပိုနှစ်သက်ပါသလဲ။
DSSK: ကျွန်မကတော့ Burma ဆိုတဲ့ အမည်ကိုိကြိုက်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အစိုးရက ဘာအထောက်အထားမှ မရှိဘဲ လူတွေရဲ့ဆန္ဒမပါပဲ ပြောင်းခဲ့လို့ပါ။
LP: နိုင်ငံခြားသားဧည့်သည်တွေ မြန်မာနိုင်ငံကိုလာလည်တာကို ဆန့်ကျင်ခဲ့ဘူးတယ်နော်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်အနည်းငယ်က ဒီအပေါ်မှာ ခင်ဗျား ဘောထား ပျော့ပြောင်းလာတယ်။ အခုကော နိုင်ငံခြားသားဧည့်သည်တွေ မြန်မာနိုင်ငံကိုလာလည်တာကို ဘယ်လိုခံစားရလဲ။ နိုင်ငံခြားသားဧည့်သည်တွေဟာ ဒီမိုကရေစီ ပေါ်ထွန်းလာရေးမှာ အကျိုးပြုနိုင်မယ်လို့ ထင်လား။
DSSK: NLD အနေနဲ့ ဒီလိုဆုံးဖြတ်ခဲ့တာ လွန်ခဲ့တဲ့ ၆ လ ၇လ လောက်ဖြစ်မယ်ထင်တယ်။ ကျွန်မတို့အနေနဲ့ အုပ်စုလိုက်လာတဲ့ ဧည့်သည်မျိုးကိုတော့ မနှစ်သက်ပါဘူး။ သီးခြား(အုပ်စုမဟုတ်) လာတဲ့ ဧည့်သည်မျိုးတွေကတော့ ကိစ္စမရှိပါဘူး။ နည်းမှန်လမ်းမှန်နဲ့ လာတဲ့ နိုင်ငံခြားသားဧည့်သည်တွေကတော့ အကျိုးပြုနိုင်ပါတယ်၊ အစိုးရနဲ့ မပါတ်သက်ဘဲ သာမာန်လူတွေရဲ့ လုပ်ငန်း(ကား၊ဟိုတယ်၊စားသောက်ဆိုင်) ကိုဆက်နွယ်ပြီး လာရောက်တာမျိုးပါ။ နိုင်ငံခြားသားဧည့်သည်တွေဟာ ဒီမိုကရေစီဘက်တော်သားတွေနဲ့ တွေ့ဖို့လာတာဆိုရင်လည်း ကူညီရာရောက်ပါတယ်။
LP: ဘာကြောင့် နိုင်ငံခြားသားဧည့်သည်တွေ လည်ပတ်ဖို့ (အစိုးရက)ပိတ်ပင်ထားတဲ့ နေရာတွေများနေရတာလဲ။ ဒါကရော အနာဂတ်ကို ပြောင်းလဲစေနိုင်လိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါသလား။
DSSK: ကျွန်မသေသေချာချာတော့မသိဘူး။နယ်စပ်ဒေသတွေ တလျှောက်မှာ မငြိမ်မသက်တာတွေဖြစ်နေတာတွေ၊ လုံလောက်တဲ့ နားခိုစားသောက်ရန် နေရာတွေကလည်း လည်ပတ်မဲ့နေရာတွေမှာ မရှိတာတွေ ကြောင့်လို့ထင်ပါတယ်။
LP: မြို.တော်ဟောင်း ရန်ကုန်ဟာလည်း အချိန်ရဲ့ စီးဆင်းမှုတွေထဲမှာ ပါဝင်နေတော့ ပြောင်းလဲမှုတွေ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်လား။ ရန်ကုန်မှာ ကြီးပြင်းလာခဲ့တဲ့သူတယောက်အနေနဲ့ LP: လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်တွေအတွင်း ဘာအပြောင်းအလဲတွေ မြင်မိပါသလဲ။ မြို.တော်ရဲ့ ဘယ်အစိတ်အပိုင်းကို အကြိုက်ဆုံးလဲ။
DSSK: ကျွန်မ နေအိမ် အကျယ်ချုပ်ကျ ကတဲက (ခုထိ) ကြီးကြီးမားမား ဘာအပြောင်းအလဲမှ သတိမထားမိပါဘူး။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၇နှစ်အလွန်က ကျွန်မ မမြင်ဘူးခဲ့တဲ့ moble ဖုန်းကိုလူအတော်များများ သုံးနေတာကိုတော့ သတိထားမိပါတယ်။ လမ်းတွေ၊ အိမ်တွေကတော့ ကျွန်မမြင်ဖူးခဲ့တဲ့ အရင်အတိုင်းပါပဲ။ ရွှေတိဂုံကတော့အရမ်းအရေးကြီးပါတယ် ပြီးတော့ ဆူးလေ ဒါပေမဲ့ ကျွန်မရဲ့ အချိန်တော်တော်များများကတော့ NLD ရုံးမှာပဲ ကုန်ဆုံးခဲ့တာပါ။
LP: ခင်ဗျားရဲ့အဖေ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကို မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လွတ်လပ်ရေး ဗိသုကာလို့ မြင်ကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပြတိုက် (ဗိုလ်ချုပ်နေအိမ်ဟောင်း) ကိုတော့ပိတ်ထားတယ်။ ဘာကြောင့်လို့ထင်ပါသလဲ။
DSSK: ကျွန်မထင်တာကတော့ အစိုးရက လူတွေ အဲ့ဒီကို မသွားစေချင်ဘူး။ လူတွေကို ကျွန်မအဖေ အကြောင်း သတိမရစေချင်ဘူး။ ပြီးခဲ့တဲ့ ဆယ်စုနှစ်တွေ ကတဲက ကျွန်မ အဖေရဲ့ ပုံကို အစိုးရရုံးတွေမှာ တရားဝင်ချိန်ဆွဲခွင့် မပြူခဲ့ဘူး ဖြစ်နိုင်တာက ကျွန်မနဲ့ ပါတ်သက်ပီးတွဲမမြင်စေချင်တာရယ်၊ တပ်မတော်အခန်းကဏ္ဍမှာကျွန်မအဖေရဲ့ လေးစားခံရမှု နဲ့ ကျမကို (တွဲမမြင်စေချင်တာဖြစ်မယ်)။
***နာက်ထပ်အသစ်ထုတ်ဝေမဲ့ Lonely Planet’s Myanmar (Burma) guidebook မှာထည့်သွင်းထုတ်ဝေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Posted by Mr Htay Tint at 1:31 AM